bedava deneme bonususlot siteleribitcoin bahisvurkacbahis.comsupertotovip.comtipobetm.combetturkeygiris.orgvenusbetgiris.netKralbet Girişkralbetz.com A Royal Runaway Romance – Gold Channel Movies
Lose the map. Find your heart.Apr. 09, 2022Canada84 Min.TV-G
ဒီတစ်ခါတော့ ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် လူငယ်ဆန်ဆန် အချစ်ကားလေး တင်ဆက်ပေးပါရစေ။ လူငယ်ဆန်တဲ့အပြင် တော်ဝင်ကားလေးဖြစ်တာကြောင့် စိတ်ကူးယဥ်ချင်စရာ ကားကောင်းလေးဖြစ်တာ အသေအချာပါပဲနော် ။ ပြီးတော့ IMdb rating 6.9လည်း ရထားသေးတယ်နော်။
Australiaနိုင်ငံရဲ့ မကြာခင်မှာ ထီးနန်းဆက်ခံရတော့မယ့် တော်ဝင်မင်းသမီးလေးဟာ ပုံတူပန်းချီဆွဲဆရာနဲ့ ချစ်မိသွားပါတယ်။ ပန်းချီဆရာလေးကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အတွက် ပန်းချီဆွဲခြင်းအလုပ် ပြီးတဲ့အခါမှာ အိမ်ပြန်ရပါတယ်။
ဒီတော့ ချစ်မိသူ တော်ဝင်မင်းသမီးလေးဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံကို သွားဖို အားထုတ်တဲ့အခါ သူ့ရဲ့ဦးရီးတော် သံအမတ်ကြီးမွေးနေ့ကို အကြောင်းပြကာ ချစ်သူကို တွေ့ရဖိုအရေး အမေရိကန်ကို ရောက်လာပါတော့တယ်။
ဒါပေမယ့် သူ့ချစ်သူနေတာက ချီကာဂိုဖြစ်ပြီး သူတိုရဲ့ဦးရီးတော်ရဲ့အိမ်ဟာ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မှာဖြစ်နေတော့ သူတစ်ယောက်တည်း ချီကာဂိုကို ခိုးထွက်ဖို အကြံထုတ်ရတာပေါ့။ ဦးရီတော်နဲ့ မယ်တော်ဟာလည်း မင်းသမီးလေးကို စောင့်ရှောက်ဖို ကိုယ်ရံတော်လူချောတစ်ယောက်ကို တာဝန်ပေးအပ်ထားပါတယ်။
ချစ်သူကို သွားတွေ့ဖို ခိုးထွက်မယ့်အရေးမှာ ဘုနဲ့ဘောက် မျက်နှာကြောလုံးဝမတည့် နောက်က တစ်ကောက်ကောက်လိုက်နေတဲ့ ကိုယ်ရံတော်ဟာ ဆူးငြှောင့်ခလုတ် ဖြစ်နေတာပေါ့။
ဘယ်လိုတွေရိုမယ် ဘယ်လိုတွေ ဟာသတွေဖြစ်မလဲဆိုတာ အားလုံးပဲ ကိုယ့်ဘာသာ ဆက်ကြည့်လိုက်ပါတော့နော်။ ကြည်ကြည်နူးနူးအချစ်ကားလေးကြည့်ပြီး အားလုံး စိတ်အပန်းပြေနိုင်ကြပါစေနော်။
Translated By Keith,N3XO,Sarah,LuYui
Original title A Royal Runaway Romance
Download Mega SD 480p Myanmar 311 MB
Download Mega HD 720p Myanmar 740 MB
Download Mega FHD 1080p Myanmar 1.2 GB
Download Megaup SD 480p Myanmar 311 MB
Download Megaup HD 720p Myanmar 740 MB
Download Megaup FHD 1080p Myanmar 1.2 GB
Download G Drive SD 480p Myanmar 311 MB
Download G Drive HD 720p Myanmar 740 MB
Download G Drive FHD 1080p Myanmar 1.2 GB